ပုံစံမျိုးစုံလွဲမှားနေတဲ့ အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပါလား > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် / ပုံစံမျိုးစုံလွဲမှားနေတဲ့ အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပါလား
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ June 22, 2015 အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် Leaveacomment 156 Views
ရေးသားသူ: မင်းထက်အောင် > အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
မင်းထက်အောင်-အောက်တိုဘာမှာလား! နိုဝင်ဘာမှာလား! ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ရက် မကြေငြာသေးလို့ နေ့အတိအကျမသိရသေးပေမယ့် ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူတွေ အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ကာလတွေမှာပဲ ဇွန်လ ၈ မှ ၂၁ ရက်နေ့အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မဲစာရင်းတွေမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးလွဲမှားနေတဲ့ကိစ္စဟာ ဝေဖန်စရာတွေပါ။
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ၀ါခရူကျေးရွာသူ မိချမ်းမွန်က “မဲထည့်လို့ရအောင် လာကြည့်တာပါ၊ မှတ်ပုံတင်ပါ ယူလာတယ်၊ မှတ်ပုံတင်မှာနဲ့တူသလားဆိုတာတိုက်ဖို့လေ၊ ဒါပေမယ့် ကျမနာမည်စာရင်းမှာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မပါဘူး၊ အဖေနဲ့ အမေတော့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေ ပါတယ်၊ မောင်နှမတွေလည်း မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မပါဘူး” လို့ လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA ကို ပြောပါတယ်။
မုဒုံမြို့နယ်၊ ကလော့သော့ကျေးရွာသား နိုင်ဆီနွန်ကလည်း “မဲစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ စိတ်၀င်စားတာ တော်တော်လေးနည်းတယ်၊ လာကြည့်တဲ့သူ တော်တော်လေးနည်းတယ်၊ အများဆုံးရှိမှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလောက်ပဲလာကြည့်ကြတာ၊ တော်ရုံဆိုရင် လာကိုမကြည့်ကြပါ၊ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ေ၀တာတွေရှိတယ်၊ ေ၀ပေမယ့်လည်း ပေးလိုက်ရုံပဲ ဘယ်သူမှပြန်မမေးကြဘူး၊ ဝေပေးပြီးရင်ပြီးသွားပဲ” လို့လည်း IMNA သတင်းထောက်ကို ပြောပါတယ်။
အလားတူ သံဖြူဇရပ်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာလည်း အခြေခံမဲစာရင်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတဲ့အတွက် လာကြည့်ရှုသူအလွန်နည်းပါတယ်လို့လည်း မြို့့ခံတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
သံဖြူဇရပ်မြို၊ အောင်ဇေယျရပ်ကွက်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်အိမ်က “ဒီမဲရုံမှာ မဲပေးခွင့် ၁၉၀၀ ဦးကျော်ရှိတယ်၊ ဒီမနက်လာကြည့်တဲ့သူ အယောက် ၅၀လောက်ပဲရှိတယ်၊ လာကြည့်တဲ့သူတွေ သိရအောင် ရပ်ကွက်တွေမှာ ပိုစတာကပ်တယ်၊ လက်ကမ်းစာစောင်တွေေ၀တယ်၊ အသံချဲ့စက်နဲ့လည်း ရပ်ကွက်ထဲလှည့်ပြီး အော်တယ်” လို့ IMNA ကို ရှင်းပြပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် ၁၀ မြို့နယ် အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ၁၄ ရက်ကြာ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်/ကျေး ရုံးပေါင်း ၁၂၆၈ နေရာမှာကပ်ထားမှာဖြစ်ပြီး မဲပေးခွင့်ဦးရေ ၁၄ သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့လည်း ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကောက်မရှင်ခွဲ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။
အခုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် မဲဆန္ဒရှင်များစာရင်းတွေထဲမှာတော့
-၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင်ရ့ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း လက်ရှိထုတ်ပြန်တဲ့ အခြေခံမဲစာရင်းမှာ နာမည်ပြန်ပါမလာတာတွေ၊
-အိမ်ထောင်စုစာရင်းရှိပေမယ့်လည်း မဲစာရင်းမှာ နာမည်လုံးဝမရှိတာတွေ၊
-ကွယ်လွန်သေဆုံးသူတွေလည်း မဲပေးခွင့်စာရင်းထဲမှာ ပါရှိနေတာတွေ။
အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို အစီအစဥ်တကျလွဲမှားအောင်လုပ်ထားပြီး မဲဆန္ဒရှင်တွေ အလုပ်များအောင် တမင်တကာ လုပ်ထားတာလားလို့ ဝေဖန်သံတွေ သတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့် ပြန့်နေပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း “ပြည့်စုံမှန်ကန်သည့် မဲစာရင်းရရှိရန် သင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါသည်” လို့ ရွေးကောက်ပွဲပညာပေး လက်ကမ်းစာလွှာကနေ အောက်ပါအတိုင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာကို ဖတ်ရှုမိပါတယ်။
*မြို့နယ်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သည့်အခါ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ပုံစံ(၆၆/၆) မပြောင်းထားလျင် သင်၏အမည်သည် ယခင်နေထိုင်ခဲ့သည့် မြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်မှ မဲစာရင်းတွင်သာ ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။
-မဲစာရင်းတွင် မိမိအမည်မပါရင် ပုံစံ(၃)ဖြင့် လျှောက်ထားပါ။
-အချက်အလက်များ မမှန်လျင် ပုံစံ(၄-ဂ) ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။
-ကွယ်လွန်ပြီးသူများနှင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိသူများ ပါဝင်နေလျင် အထောက်အထားနှင့်အတူ ပုံစံ(၄) ဖြင့် ကန့်ကွက်ပါ။
*ပံုစံများကို ရပ်/ကျေးကော်မရှင်ရုံးတွင်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး မဲစာရင်းကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ (၁၄) ရက်အတွင်း ရပ်/ကျေးကော်မရှင်ရုံးသို့့ လျှောက်ထားရပါမည်” လို့ ပါရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ DVB သတင်းထောက်တစ်ဦးမေးမြန်းချက်ကို တာဝန်ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့၀င် ဦး၀င်းကြည် ရဲ့ဖြေကြားချက်ကို လေ့လာကြည့်စေလိုတယ်။
မေး။ ။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မဲစာရင်းထဲမှာ ကျမတို့ လိုက်ပြီးတော့ မေးသလောက်က နာမည်မှားတာ၊ မွေးစာရင်းမှားတာ၊ မမြင်ရတာ၊ အမျိုးမျိုးပေါ့လေ အမှားအယွင်းတွေ တော်တော်များတာရှိတယ်။ ဒီလို အမှားအယွင်း အများကြီး ရှိနေတဲ့အထဲမှာ အန်ကယ်တို့အနေနဲ့က လာပြောကြားဖို့ ကြေညာထားပါတယ်။ အကယ်၍ လူထုအနေနဲ့ မဲစာရင်းမှာ မှားနေတာကို လာမပြောခဲ့လို့ရှိရင်….။
ဖြေ။ ။“လာမပြောရင်တော့ ဆောရီးပဲ၊ သူတို့တာ၀န်နော်၊ မှားနေရင် နောက်တခါကျရင် ဒီအမှားပဲ ပါမှာပဲ။ အခုမပါလို့ လာမပြောဘူးဆိုရင်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ်မဲပေးချင်ရင် လာကြည့်ပါ။ မှားရင်ပြင်ပါ။ မပါရင် နာမည်လှေျာက်ပါလို့ ပြောထားတယ်။ အဲဒါမှ ကိုယ့်တာ၀န်ကိုယ်မှ မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ လူသန်းပေါင်း ၃၀ ကျော်ကို လုပ်ရတာ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို ကြိုပြီးတော့ ကပ်တယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာအပြီးမှာ တခါတည်းကပ်တယ်။ အခု ကပ်ထားတယ်။ လာကြည့်ပါလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါမှ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး..နော်။”
ဒါကြောင့် အခြေခံမဲစာရင်းထဲ ကိုယ့်နာမည်မပါခဲ့ရင်၊ တခုခုလွဲမှားနေခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်/ ကျေးရုံးကိုသွားပြီး အမြန်စာရင်းသွင်းလိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
မင်းထက်အောင် အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် 2015-06-22
Tags မင်းထက်အောင် အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
Previous သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား
Next မွန်ပြည်နယ်တွင် ယမန်နှစ်ထက် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ ပိုဖြစ်များ